တရားရုံးတော်မှ အမှုရင်ဆိုင်ခြင်း (Link 1) | MM Movie Store
ဇာတ်လမ်းအညွှန်ကတော့ ရထားပေါ်မှာကောင်မလေး ၅ယောက်လောက်ကို နှိုက်မြည်းတဲ့ကျော်ကြီးဟာတရားစွဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်.အဲ့ဒါနဲ့ တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ.ဒါပေမယ်လည်းအဲ့လိုအမှုတွေကို လိုက်ပေးတဲ့ နာမည်ကြီးရှေ့နေမလေးမိဇင်ကြီး က ကျော်ကြီးကို ဂရုဏာသက်ပြီးအမှုကိုလိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်. တရားရုံးမှာ စုံထောက်တွေကကျော်ကြီးရဲ့လူကြီးကစားစရာတွေနဲ့ သက်သေပခဲ့ပေမယ့်လဲရှေ့နေမလေး မိဇင်ကြီး ရဲ့ လျှို့ဝှက်သိုင်းကွက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရပ်တန့်စက်ကြောင့် မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး.
ကျော်ကြီးနဲ့ရှေ့နေမလေး မိဇင်ကြီး တို့ နှစ်ယောက်ပေါင်းပီ့းတရားသူကြီး ကျော်ကြီးကို သဘောကျပြီးအမှုနိုင်အောင် လုပ်ရင်းနဲ့ တရားသူကြီးမကလဲကျော်ကြီးကို သဘောကျ ရှေ့နေမလေး မိဇင်ကြီး ကလဲစုံထောက်ကြီးကို သဘောကျပြီး တရားရုံးထဲမှာတင်အချစ်နာလန်ထသိုင်းတွေ ထချကြတာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာ.ဘယ်လိုသိုင်းကွက်တွေကြောင့်တရားသူကြီးမကကျော်ကြီးကို ကြွေသွားလဲဆိုတာဆင်ဆာမပါ ပြောင်ပြောင်ရှင်းရှင်း ကြည့်ရှူအားပေးလိုက်ကြပါဦးဗျာ….
ဒီတစ်ခါတော့ အိုကြီး အိုမတွေ ရှောင်ပြီး အလန်းလေးတွေပါတာ တင်ဆက်ထားပါတယ်ကျော်ကြီး နဲ့ ရောင်းရင်းများ အပြင်အလန်းလေး မိဇင်ကြီးကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါရိုက်တာ အုပ်ကြီးက အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ထားပါတယ်သိုင်းပေါင်းစုံ အကွက်တွေနဲ့ ဆုပေါင်းများစွာရထားတဲ့ဇတ်လမ်းကို အခုပဲ နွားနို့သောက်ရင်း ကြည့်လိုက်ကြပါစို့
Natalie – Link 2
The Scent – Link 2
The Scent – Link 1